Romantic Christmas Fashion Couple Photos of Aung Ye Linn and Moe Hay Ko | Myanmar Celebrity Couple Photos
Romantic Christmas Fashion Couple Photos of Aung Ye Linn and Moe Hay Ko
These are Romantic Christmas Fashion Couple Photos of Aung Ye Linn and Moe Hay Ko. Aung Ye Linn is Myanmar Popular Model Boy. He also starts starring for some videos as an actor. Moe Hay Ko is one of the Myanmar sexy and popular models and actress. Moe Hay Ko becomes popular among Burmese audience because of her sexy and hot style and fashion. She is not same with other Burmese models, because she is not only beautiful and pretty model, but also hot and sexy actress. Now, she is acting for many Myanmar videos and she also sings some hot song.
Myanmar Beautiful Model Girl, Moe Hay Ko's Christmas FashionMyanmar Popular Model Boy, Aung Ye Linn and Super Model Girl Moe Hay Ko
မြန်မာမော်ဒယ်ဘိုင်း အောင်ရဲလင်း နှင့် မော်ဒယ်ဂဲ မိုးဟေကို တို့ရဲ့ ခရစ္စမတ် ဖက်ရှင် စုံတွဲပုံလေးတွေပါ။ အောင်ရဲလင်း က အခုတစ်လောမှာ နာမည်ရလာတဲ့ မော်ဒယ်ဘိုင်းတစ်ယောက် ဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေ ကိုပါ လုပ်ဆောင်လာပါပြီ။ မြန်မာဗီဒီယို တစ်ချို့မှာ မင်းသားသစ် တစ်လက်အနေနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတယ် လို့သိရပါတယ်။ မိုးဟေကို ကတော့ အခုတလော နာမည်ကြီး လာတဲ့ မော်ဒယ်မလေး ဖြစ်သလို တက်သစ်စ မင်းသမီးလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ TV ကြော်ငြာတွေ၊ မဂ္ဂဇင်း Cover တွေ သာမက ဘဲ မကြာခင် မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်လမ်းတွေမှာ မင်းသမီး အသစ်တစ်လတ် အနေနဲ့ တွေမြင်ကြရတော့ မှာ ပါ။
IsabellaMay 6, 2009 at 6:46 PMThe Boy is wayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy cute4the GirlReplyDeleteAnonymousSeptember 30, 2009 at 5:45 AMi love all this photosthey should get award.i love the way they dress.ReplyDeletepawNovember 14, 2009 at 5:56 PMi love Nay Toe n RZNReplyDeleteloveJanuary 8, 2011 at 3:12 PMI love Aung ye linn . i very very dont like moe hay kooooooooooooooooooooooo .ReplyDeletenyiFebruary 25, 2011 at 12:36 AMloveေ၇ မိုးဟေကိုက၇ုပ်ကဆိုးပေမယ့်..လန်းတယ်နော် body ၊မောင်၇ဲလင်းကတော့..ကျုပ်တို့၇ွာကသူ၇င်းငှားလေ..ဖြူတာနဲ့မည်းတာဘဲကွာတယ်..၇ုပ်တော့တော်တော်တူတာဗျ.အောင်၇ဲလင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်၇င်..ကျုပ်၇ွာကိုလာခဲ့မောင်၇ဲလင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်လေ။ReplyDeletehlaingApril 25, 2011 at 11:53 PMဖြစ်နိုင်ရင် အောင်ရဲလင်း နဲ့ပဲမိတ်ဆက်ပေးပါလာရှင့်..အရမ်းကိုခင်မင်ချင်းနေလိုပါ...ReplyDeleteAdd commentLoad more...